Red Berries Mojito smoothie ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
Red Berries Mojito smoothie
Non Dairy Smoothie လေးတစ်ခုကို
သောက်သုံးသူတိုင်းကို စိတ်ရောကိုယ်ပါ လန်းဆန်းစေမှာပါ။
ပါဝင်ပစ္စည်းနဲ့ ပြုလုပ်ပုံလေးတွေကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် . . .။
1. MONIN Redberry Puree' - 45 ml
မိုနင်းတံဆိပ်ဘယ်ရီစုံအနှစ် - ၁ ပတ်ခွဲ
2. MONIN Mojito Syrup - 15 ml
မိုနင်းတံဆိပ်မိုဟိတိုအဆီ - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ ဇွန်း
3. Lime Juice - 15 ml
သံပရာရည် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ ဇွန်း
4. Mint Leaves - 6-8 leaves
ပူစီနံရွက် - ၆-၈ ရွက်
ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုBlender(မွှေစက်)ထဲသို့ ထည့်သွင်းပါ။ ထို့နောက်
Crushed Ice (ရေခဲခြစ်ပြီးသား)ကို ဖန်ခွက်နှင့် တစ်ခွက်ခွဲထည့်ပြီး ရေခဲများ
ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကြေညက်သွားပြီဆိုပါက ဖန်ခွက်ထဲသို့ ထည့်သွင်းပြီး
ချယ်ရီသီးအနီ၊ ပူစီနံအညွန့်လေးများဖြင့် အလှဆင်လိုက်ပါ။
အခုဆိုရင်တော့ အဆီလည်းမတက်၊ အမူးအမောပြေပြီး စိတ်ရောကိုယ်ပါ
လန်းဆန်းအားဖြည့်ပေးမယ့် Red Berry Mojito, Non Dairy Smoothie လေးရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။
Monin တံဆိပ် ဘယ်က ထုတ်တာလဲ။ဘယ်ဆိုင်မှာ ဝယ်ရနိုင်သလဲ?
Quarto Product မှာဝယ်လို.ရပါတယ်